Apple ngbanye na weebụsaịtị ya maka ibi akwụkwọ 3D, ọdịnihu nke mbipụta | Esi m mac
Apple nzọ na weebụsaịtị ya maka mbipụta 3D, ọdịnihu nke mbipụta
Anyị kwụsịrị ụbọchị ahụ na-ekwu maka ihe Apple apụtaghị na ọ bụghị arụpụtara ya mana na ha na-echebara na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị, anyị na-ekwu maka 3D na-ebi akwụkwọ. 5 ọnwa gara aga anyị gwara gị na ndị si Cupertino ha tinyere ụdị ndị a na-ebi akwụkwọ na weebụsaịtị ha. Ugbu a, abịaghachila m n'isiokwu a n'ihi na, n'ụzọ dị ịtụnanya, agara m ihe ọmụmụ nke kpakpando ahụ abụla ngwa nbipute nke Apple na-enye na weebụsaịtị ya.
Ihe mbụ Apple na-ere na ụlọ ahịa ya n'ịntanetị bụ ngwaahịa ya, mana ọ na-erekwa ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ n'okpuru uwe nke ịbụ ngwa mgbe ha ruru nkwekọrịta azụmahịa na ndị nrụpụta ha. Ugbu a, n'agbanyeghị nkwekọrịta ole dị ma ọ bụrụ na Apple weere na ngwaahịa ahụ ezughi oke ogo dị mkpa nke ika ahụ chọrọ yana na ha enweghị ike iji ngwaahịa Apple, ha agaghị enwe nhọrọ nke ịbụ akụkụ nke weebụsaịtị Apple.
Izu gara aga m gara usoro obibi akwụkwọ 3D, nke maka ndị na-amaghị ụdị mbipụta akwụkwọ ọhụrụ a, ọ dị ka afọ ole na ole ọ ga-ewepụta ọtụtụ ọrụ yana ọ bụ na site na ndị na-ebi akwụkwọ a, ha enweta iberibe ruo ugbu a nwere ike na-efu puku kwuru puku euro maka ihe dị mfe nke ebe a rụpụtara ha na ndị nnọchi anya ahụ dị na nkesa ha.
Apple maara na akaebe nke a bụ na site n'ịle ntakịrị na weebụsaịtị ha, enwere m ike ịchọpụta na ha nọgidere na-enwe ọrịre ma ngwa nbipute 3D na ihe oriri maka otu. N'okwu a, akara nke ha na-aga n'ihu na-ere na ebe nrụọrụ weebụ Apple bụ otu n'ime ndị a ma ama na nke kachasị mma, yana inwe ọtụtụ ndị ọrụ n'ụwa niile.
Ọ bụ Ultimaker 2 + na ngwa nbipute, site na ụlọ Ultimaker. N'afọ ndị na-adịbeghị anya ahụrụ m ụdị ụdị nke ndị na-ebi akwụkwọ nke, dịka ọkà okwu nke usoro ọmụmụ m gara, si kwuo, ejiriwo nnukwu ụlọ ọrụ jiri ihe karịrị afọ 15. Ugbu a, ọtụtụ afọ mgbe emepụtachara usoro nrụpụta ahụ yana ndị na-ebi akwụkwọ 3D mechara pụta na ahịa yana ebe nyocha.
Ọzọkwa, anyị na-ahụ otu Apple si ebute ụzọ n'ihe na-eme n'ụwa nke anyị bi n'ime ya. Ọ bụrụ n’itabeghị mbọ ịmụkwu gbasara ụdị ndị na-ebi akwụkwọ a, anyị na-agba gị ume ka ị mee ya na onye ma ị na-ejedebe imebe ihe na gị Mac na-eme ka ha mezuo na a ngwa nbipute dị ka nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple nzọ na weebụsaịtị ya maka mbipụta 3D, ọdịnihu nke mbipụta
Cook na-ekwu na ahịa Apple Watch mebiri ndekọ n'izu mbụ nke ịzụ ahịa ezumike
Windows dozie, n'efu maka obere oge